Ị ga mara tupu ịzụ a Hoverboard - Jomo Technology Co., Ltd
Na elu-tech onwe adịzi Usoro, abụọ steadiness na wuru-na gyroscope na mpo ihe mmetụta, nnọọ mfe mezie, dị nnọọ agbanwe gị physique ibu obi, gị skuuta ga flexibly nyefee n'ihu, backward, ekpe, aka nri, na ọbụna atụgharị 360 ubre a ntụpọ. Onye nke kasị mma atụmatụ a skuuta bụ na ị jikọọ ya Bluetooth via cellular ngwa. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, i kwesịrị họọrọ ndị kasị dị irè ngwaahịa na-agaghị ebi na-ewute gị na isiokwu nke ya ịrụ. Ugbu a, ị na-adịghị na ichegbuwe onwe banyere batrị. Koowheel hoverboard batrị nnọọ inogide, dị ka K3 onwe guzozie skuuta, batrị ụdị bụ 18650 elu arụmọrụ batrị sel, nkezi ndụ bụ 1500 cycles.
Adịghị m akwa ụta na ịzụ Powerboard site Self adịzi 2 wheel Electric skuuta ọbụna dị ka n'oge na-adịghị dị ka na m obi ụtọ akwado ya. The Self adịzi skuuta K3 na Self-Steadiness Board site KOOWHEEL nwere a dum ọtụtụ nke ike wụfee ọ bụla 18-degeee mkpọda si n'ebe, na ọ ga-ekwe gị aka iru ọhụrụ elu ozugbo. Ịnya bụ na-atọ ụtọ, ọ bụ ezie na m dị ka a ịnya disko na-ahụ nke a ọzọ dị ka a ụmụ toy karịa a Usoro nke njem. Mmezi ị adabere backward ma ọ bụ n'ihu, elu ọsọ nke igwe.
Ọ dị mma na-ekpebi maka ọrụ nke afọ niile. Ọ ghara dị ka ihe n'ụzọ dị irè-ezo dị ka 2 onwe-guzozie scooters n'elu Otú ọ dị ga-ghọgburu, ọ bụ nnọọ mara mma nke ukwuu dị ka ihe ọma. Koowheel K3 abụọ wheel onwe-guzozie electric skuuta ka na-eto eto na-a dị mkpa ngwá ọrụ iji mee ka ahụ ike na otu akpali mee elu mee na-ezu nso na ume. Ya mere, ihe na-eme ka Koowheel Electric skuuta otú akpan akpan? Na ya niile atụmatụ na anyị na-ekwu banyere na ya price, ọ bụ na-a "na-aga kwesịrị ekwesị ugbu a jide ya" skuta. Nke a pụrụ ịbụ otu ihe ị ga-eche ugbu a na Christmas na ezumike agafeela. Powerboard site Hoverboard bụ kacha onwe-guzozie skuuta ahụ nwere ike ịbụ a ego friendly ihe na-abịa na nke kasị mma nhọrọ nwere ikpeazụ okwu ahụmahụ nke na-agba na ya. Otú o sina dị, ndị na-esonụ n'ọnụ, na-ahọpụta ndị kasị mma otu onye ga-a stroll n'ime ogige ..
Anyị electric onwe itule skuuta eji gyroscope ka amamihe ịchịkwa kwụsie ike. Haziri maka na ejima moto ume, ọhụrụ Koowheel electric skuuta na-atụle otu n'ime n'elu niile na-teren "hoverboards" na ahịa nweta ihe max gbapụrụ ọsọ nke 8MPH na 20 degrees Uphill. Segway bụ singlehandedly maka popularization nke echiche nke abụọ-wheeled, onwe-adịzi, batrị-kwadoro electric ụgbọala.
Post oge: Jan-19-2018